तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कसरी सुरक्षित राख्ने ? अपनाउनुस यी तरिका - Nagarik Bahas
तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कसरी सुरक्षित राख्ने ? अपनाउनुस यी तरिका
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ०५, २०७७ समय: ९:२०:५४
काठमाडौं । विश्वको लोकप्रिय सामाजिक संजाल हो, फेसबुक । आज हरेक मानिसहरु एक अर्कामा जोडिन फेसबुक चलाउने गर्छन् । फेसबुकाले टाढा रहेका प्रियजनहरुलाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम गर्दछ । तर पछिल्लो समय यसको दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय फेसबुकमा डाटा लिक तथा ह्याकिङ्गका घटनाले फेसबुकको सेक्योरिटी तथा प्राइभेसी नीतिमाथि प्रश्न नै खडा गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकमा आफ्नो सुरक्षा र गोपनियतालाई लिएर चिन्ता समेत व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुक वा अन्य सामाजिक संजाल ह्याक नहोस् भनेर विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो फेसबुक र अन्य सामाजिक संजालको अकाउन्ट सुरक्षित राख्नका लागि तल उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्नुहोस् :
सार्वजनिक कम्प्युटरहरू, जस्तै साइबरमा, फेसबुक वा कुनै पनि अरु सामाजिक संजाल प्रयोग गरेपछि लग आउट गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । यसै गरी कहिले पनि धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरमा पासवर्ड सेभ नगर्नुहोस् । अरु कसैको कम्प्युटरबाट आफ्नो सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने Incognito / Private Window खोलेर चलाउनु उचित हुन्छ । इनकगनिटो मोडमा प्रयोग गर्दा तपाईंको इन्टरनेट प्रयोगको इतिहास र पासवर्ड केही पनि ब्राउजरमा सेभ गरिएको हुँदैन । एजेन्सीको सहयोगमा
विश्वासको मत लिनुअघि नियुक्ति थरिथरिका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको नियुक्तिका भित्री रहस्य...
कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका प्रमुख सहित ३ जना कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
उदयपुर । उदयपुरका कोरोना संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक महिला र दुई पुरुष रहेका छन् । कृषि ज्ञान ...
काँग्रेस सहित तीन दलद्वारा सरकारमा दावी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विश्वासको मत नपाएको कारण सोमबार ढलेको छ । सोमबारको मतदानबाट नेकपा एमालेक...
प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाए विश्वासको मत, पक्षमा ९३ सांसद
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को विश्‍वास गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा ओलीले पेस गर...
उदयपुरमा थप २५ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या २ सय ३९ पुग्यो
उदयपुर । उदयपुरमा सोमबार थप २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । १० महिला सहित २५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सं...
नेपाल पक्षका सांसदहरु मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय
काठमाडौँ — नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षले सरकारलाई विश्वासको मतका लागि दिउँसो हुने मतदानमा सहभागी नहुने...